तिहारकै मुखमा भारत जानेहरूकाे यस्तो लाइन! सरकार यिनीहरूलाई तिहार लाग्दैन? – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > तिहारकै मुखमा भारत जानेहरूकाे यस्तो लाइन! सरकार यिनीहरूलाई तिहार लाग्दैन?
admin November 13, 2020 November 13, 2020 जीवनशैली, समाचार	0
२८ कात्तिक कैलाली । कैलालीको नेपाल–भारत सीमा नाकामा भारत पस्ने नेपालीहरुको लामो लाइन छ । यही लाइनमा छिन् धनगढी उपमहानगरपालिका ७ देवरीयाकी ३० वर्षीया रजिता चौधरी । उनी श्रीमानसँगै मजदुरीका लागि भारत जाँदै छिन् । उनी विगत ४ वर्षदेखि भारतको पुनामा काम गर्छिन् । प्रत्येक वर्ष दशैं र तिहारमा बिदा मिलाएर आउने उनीहरू यस वर्ष लकडाउनले काम बन्द भएपछि पहिले नै आए ।
जसोतसो दसैं त मनाए, तिहारमा भने दाजुभाइको निधार खालि राखेर काममा फर्किए । ‘म एक्लो दिदी हुँ । ३ भाइ छन्,’ उनले भनिन्, ‘अघि फोनमा पनि तिहार सकेर जानुहोला भन्दै थिए । तर, जानै पर्ने भयो ।’ काम गर्ने ठाउँबाट तारन्तार फोन आइरहेको उनले सुनाइन् । ‘तत्काल नआए फेरि नआउनु भने,’ उनले भनिन्, ‘पर्वभन्दा पीडा ठूलो लागेर जान थालेका हौं ।’
तिहारको मुखैमा भारत जान थालेका अधिकांशले नेपालमा रोजगारी नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । ‘युवाहरूलाई यहीँ राख्छौं भन्थे । अहिले हाम्रो पीडा कसैले सुनेको छैन,’ धनगढी मनेहराका देव रानाले आक्रोश व्यक्त गरे । उनी पहिलो पटक आफन्तसँगै भारत पस्दै छन् । ‘सायद अब सधैं जानुपर्छ होला,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ न त भनेको जस्तो काम पाइन्छ, न सरकारले हेर्छ ।’
गाउँमा सबैतिर तिहारको रौनक सुरु हुँदा मन खिन्न पारेर भारत जानुपरेको बाध्यता उनले सुनाए । ‘घरमा अब के खाने, के लाउने हुन थालेको छ । म जेठो छोरा हुँ,’ उनले भने, ‘अरूले तिहार मनाउन पाउन् भनेर म नमनाई काममा हिँडेको हुँ ।’ पछिल्लो केही दिनयता कैलालीको गौरीफन्टा नाका हुँदै दैनिक एक हजार बढी नेपाली भारत पलायन भइरहेका छन् । उनीहरू त्यहाँ सस्तोमा श्रम बेच्न बाध्य छन् ।
गरिबीका कारण परिवार पाल्न मुस्किल भएपछि चाडपर्वको मुखमा कोरोनाको समेत प्रवाह नगरी दैनिक सयौँ नेपाली त्रिनगर नाका भएर भारत जाने गरेका छन् । स्वदेशमा सामान्य काम समेत नपाएपछि मजदुरीका लागि पनि भारत जानुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । मुखैमा तिहार आउँदा विगतका वर्षहरूमा यतिकै संख्यामा भारतबाट नेपालीहरू आउने गरेका थिए । तर, अहिले तिहारको रौनक भुलेर भारत जानेहरूको संख्या बढिरहेको छ ।
त्रिनगर–गौरीफन्टा नाका भएर मात्रै भदौ १२ यता ६६ हजार नेपाली भारत पसेका छन् । सीमा प्रहरी चौकी डोके बजारका अनुसार ४६ हजार पाँच सय पुरुष, ११ हजार पाँच सय महिला र ८ हजार बालबालिका भदौ १२ पछि भारत गएका हुन् । दसैं सकिएपछि भारत जानेको संख्या बढेको सीमा प्रहरी चौकी डोके बजारका प्रमुख तथा प्रहरी नायब निरीक्षक भूपालसिंह थापाले बताए । उनका अनुसार दसैंपछि मात्रै त्रिनगर नाका भएर २२ हजार बढी नेपाली भारत पसेका छन् ।
कास्की २ बाट जितेपछि बिद्या भट्टराईले यसो भनिन्… हेर्नुहाेस्